ब्वाइफ्रेण्डसँग सहवास गर्दागर्दै युवतीलाई अस्पताल दौडाइयो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ब्वाइफ्रेण्डसँग सहवास गर्दागर्दै युवतीलाई अस्पताल दौडाइयो
डिसी नेपाल , ३० फाल्गुन २०७५
मड्रिड। स्पेनमा यौन सम्बन्धको बीचमा अनौठो दुर्घटना भएको छ । यहाँ एकजना युवती आफ्ना प्रेमीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा अचानक बिरामी भएपछि उनलाई त्यही अवस्थामा अस्पताल दौडाउनु परेको छ।
कहिलेकाहीँ यौनक्रिया मानिसका लागि घातक पनि बन्दो रहेछ । स्पेनकी ३१ वर्षीया एक युवतीले आफ्नो ब्वायफ्रेण्डसँग ओरल सेक्स (मुखमैथुन) गरिरहेको अवस्थामा घातक एलर्जी भएर गम्भीर रुपले निरन्तर वान्ता हुन थाल्यो । जसका कारण उनलाई आकस्मिक रुपमा अस्पताल पुर्याउनु परेको हो । घटनाबारेमा थाहा पाउँदा डाक्टरहरु नै अचम्ममा परे ।
डाक्टरहरुका अनुसार प्रेमीसँगको यौनक्रिडाका क्रममा मुखमैथुन गर्दा जब प्रेमीको विर्य निलिन् । तब उनलाई वान्ता आउन सुरु भएको थियो । साथै उनलाई स्वास फेर्न पनि कठिन भयो । उनलाई तत्कालै अस्पताल पुर्याइयो । पछि के थाहा भयो भने यौनक्रिडाको चार घण्टाअगाडि ती युवतीका प्रेमीले एमोक्सिलिन क्लेभुलेनिक एसिड पेनिसिलिन औषधि लिएका रहेछन् ।
ती युवतीलाई पेनिसिलिनको एलर्जी रहेछ । प्रेमीले सेवन गरेको औषधिको मात्रा उनको वीर्यमा समेत मिसिएका कारण मुखमैथुनका कारण उनलाई गम्भीर एलर्जी भएर वान्ता भएको रहेछ । ती युवती र उनका प्रेमीको नाम खुलाइएको छैन ।